Baaderi Basaasnimo loo Haysto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baaderi Basaasnimo loo Haysto
La daabacay torsdag 26 juli 2012 kl 09.53
Waribixin ay qoreen dad ku xeel-dheer hay'adii sirdoonka dalkii la oran jiray Jarmalka Bari ee Stasi ayaa xaqiijiyey in baaderi ka tirsan kaniisada Sweden uu u ahaan jiray basaase ka tirsan Stasi.
Ninkaan oo magacisa la yiraahdo Aleksander Radler balse Stasi ugu howla-gali jiray magaca IM Thomas oo ay wargeyska DN hordhigtay waxbixinta ayaa sheegay in uu ka shalaynayo tariikhdiisa hore iyo siday wax u dhaceen. Xaska Radler ayaa xaqiijisay in ninkeedu basaas u ahaa Stasi. 1994 dhowr sanno kabacdii markii ay burburtay dowladdii shuuciga ahayd ee Jarmalka Bari ayaa laga helay kayda macluumaadka dowladdas cadeemo muujinaya in baaderigaan ahaa basaas uga howl-gala Stasi dalka Sweden.
Radler in uu yahay basaas Stasi ka tirsanaa waxaa la fashilay markii ugu horaysay sannadkii 1994 uuna ku howl-gali jiray naynaasta ah IM Thomas. Waxaana fashilay ardey jarmal ah oo markaas ka dhiganayey jaamacad maadada caqiidada. Sannadkii 2011 ayaa brofesor Birgitta Almgren uga faalootay arintaan book ay daabacday. Radler ayaa asagu ilaa hada arintaan inkirsan balse markii wargeyska Expressen uu daabacay macluumad laga helay keydkii Stasi oo laga dhex helay magaca Radler ayey Luleå Stift bilowday baaritaan ay arintaan ugu kuur-galayso, waxayna baaritaanka ku soo dareen nin ku xeel-dheer arimaha sirdoonkii Stasi oo la yiraahdo Helmut Muller.
Hada warbixin ka kooban 39 bog oo ninkaas soo bandhigay ayuu ku sheegay in IM Thomas kamid ahaa basaasiinta ug fiicnaa uguna howl-karsan hay'adii sirdoonka ee Stasi.
Wargeyska DN ayaa warbxintaan hordhigay Radler, markii ugu horaysay ayuu radler sheegay in uu ka shalaynayo dhacdadaan iyo taariiqdiisa.
Radler ayaa isku geyn ka tirsanaa Stasi mudo dhan 25- sanno, taas oo ah ka badan inta caadiyan ay basaasiintu kamid ahaan jireen Stasi oo ahayd ugu badnaan 6 ilaa 7- sanno.
Radlar ayaa hada ah howl-gab saas darteedna aan ka baqaynin in uu waayo shaqo, laakiin waxaa suurta gal ah in uu waayo aqoonsigiisa baaderanimo.
Hadana waxaa socda baaritaan lagu ogaanayo in nikaan dhamaan tariiqdiisa ka beensheegay. Laakin wax kastoo lagu helo Radlar ayuusan wax cinqaaka kala kulmi doonin hadii ay ahaan lahayd Sweden am jarmalka. Sidaas waxaa radio Sweden u sheegay Anna Wernqvist oo ah xeer yaqaan ka howl-gala Luleå Stift oo gacanta ku haysa baaritaanka arimaha Radler.